Kandai simbi mhepo kusunungurwa vharafu - China Tianjin Tanggu TWT Valve
Kandira simbi mhepo kusunungurwa vharafu
The chiutsi zvichiitika mvere, kunogona kudzivisa panowanikwa kufurirwa nokufamba kana zvimwe zvinokuvadza mananara. Air inogona asunungurwa muna Mapaipi kana mvura izere nemvura, uye anogona akatozotamiswa kana akaipa kumanikidzwa vari Mapaipi, dzakadai mvura mbiru inonatsa mamiriro achazarurirwa rwoga akazarura, kupinda Mapaipi yokubvisa asina kumanikidzwa. High nokukurumidza chiutsi gasi kuyerera, uye kunyange yakakwirira nokukurumidza wokufema yakavhenganiswa nemvura mhute haazoiti chiutsi chengarava kuti ...
The chiutsi zvichiitika mvere, kunogona kudzivisa panowanikwa kufurirwa nokufamba kana zvimwe zvinokuvadza mananara.
Air inogona asunungurwa muna Mapaipi kana mvura izere nemvura, uye anogona akatozotamiswa kana akaipa kumanikidzwa vari Mapaipi, dzakadai mvura mbiru inonatsa mamiriro achazarurirwa rwoga akazarura, kupinda Mapaipi yokubvisa asina kumanikidzwa.
High nokukurumidza chiutsi gasi kuyerera, uye kunyange yakakwirira nokukurumidza wokufema yakavhenganiswa nemvura mhute haazoiti chiutsi chengarava kuvharwa pachine. The pokubuda napo rinovharwa chete pashure mhepo iri pauri chose.
Chero nguva, chero bedzi hurongwa kufurirwa dererei pane mumhepo kumanikidzwa, dzakadai panowanikwa mvura mbiru inonatsa Fani, mhepo yepasi vachange pakarepo kuzarura hurongwa mumhepo, kudzivisa chidzoke yakaipa kumanikidzwa munyika. Panguva iyoyowo, iyo hurongwa nokuisa nguva nenguva netsika anogona kuwedzera nokuisa unodiwa.
Kushandisa tembiricha: -20 ℃ ~ 120 ℃
zvinoshanda kumanikidzwa: PN1.0 ~ 1.6MPa
zvinoshanda size: DN25 ~ DN300
Connection mureza: GB · ruzha · ISO · BS
Previous: Air kusunungurwa vharafu
Next: Double orifce mhepo kusunungurwa vharafu
Kandai Iron Air Release Valve
kukwikwidzana Cast Iron Air Release Valve
yemafuta kadikidiki Air Release Valve
Sigle orifce mhepo kusunungurwa vharafu
Double orifce mhepo kusunungurwa vharafu